«Kidnapping» – Tsaratanàna: kandida depiote hanatitra dosie nalain’ny jiolahy an-keriny | NewsMada
«Kidnapping» – Tsaratanàna: kandida depiote hanatitra dosie nalain’ny jiolahy an-keriny
Nalain’ny jiolahy an-keriny tao Tsaratanàna, ny alahady alina hifoha alatsinainy omaly, ny lehiben’ny Dren Betsiboka izay anisan’ny kandida mpifaninana hofidina solombavambahoaka, hatao ny 27 mey 2019 ho avy izao. Lasa hatramin’ireo antotan-taratasiny saika haterina any amin’ny Ovec any an-toerana.
Raha ny fampitam-baovao voaray, teo amin’ny sampanan-dalan’i Bekapaika sy Tsaratanàna no nitranga ilay trangana fakana an-keriny. Handeha hanatitra ny antontan-tsaratasy filatsahan-kofidina any amin’ny Ovec Tsaratanàna izy no nifanehitra tamin’ireo mpaka an-keriny, tsy fantatra mazava ny isan’ireo. Voalaza fa teny an-dalana nandeha moto nanao taingin-droa izy tamin’io alina io no nifanojo tamin’ireo jiolahy. Lasan’ireo jiolahy hatramin’ny antontan-taratasy firotsahan-kodifina teny aminy izay haterina tany amin’ny Ovec. Tsy mbola fantatra, araka izany, ny toerana nitondran’ireo jiolahy ity tompon’andraiki-panjakana ao amin’ny faritra Betsiboka ity. Tsy mbola nandrenesam-baovao rahateo ny fianakaviany hatry ny omaly. Na eo aza izany, efa nandefa zandary hanao fikarohana ny toerana nihazonan’ireo jiolahy azy ny zandary avy ao Betsiboka.
Kajikajy politika avo lenta…?
Mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy koa i Gabriella kely, ilay zazakely 6 taona nalain’ny jiolahy an-keriny tao Ambodiriana, kaominina ambanivohitr’i Maevatanana II, distrikan’i Maevatanana efa herinandro izay. Olona efatra izy ireo no nalain’ny jiolahy an-keriny tamin’io fotoana io, saingy ny iray maty notifirin’ireo mpaka an-keriny, ny roa tafatsoaka raha mbola notazonin’izy ireo an-keriny kosa ilay zazakely. Toerana efa malaza ratsy ary tafiditra ho isan’ny faritra mena amin’ny “kidnapping” ny ao Tsaratanàna. Nanamafy izany rahateo ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny alalan’ny tatitra nataon’izy ireo teny amin’ny Toby Ratsimandrava, ny herinandro teo. Nahatratra 14 ny trangana fakana an-keriny tao Tsaratanàna ka olona miisa 27 no indray nianjadian’izany, ny enim-bolana faharoa 2018, ary fanampin’izany ny telo volana faharoa tamin’ity taona 2019. Ahina ho misy ifandraisany amin’izany ity trangana fakana an-keriny kandidà ity sa kajikajy politika avo lenta? Misy ambadika eo amin’ny samy mpifaninana ao anatin’ity fifidianana solombavambahoaka ity? Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary no mamaritra ny marina rehetra momba ity raharaha ity.